Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. कोरोनाको कारण बेलायत तीन साताका लागि ‘लक डाउन’ – Emountain TV
एजेन्सी, ११ चैत । कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र हुन थालेपछि बेलायत पनि ‘लकडाउन’ गरिएको छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले मंगलबारदेखि लागूहुनेगरी तीन साताका लागि देशभर ‘लकडाउनको घोषणा गरेको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यहरुले जनाएका छन् ।
लक डाउनको प्रावधान अनुसार अब बेलायतका नागरिकहरु दिनको एकपटक मात्रै घर बाहिर निस्कन पाउने छन् । अत्यावश्यक काममा जाने, अत्यावश्यक सामग्री किन्ने काम त्यही समयमा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
औषधि पसल तथा अत्यावश्यक सामग्री बाहेकका पसल बन्द गर्न पनि प्रधानमन्त्री जोन्सनले निर्देशन दिएका छन् । दुईजना भन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री जोन्सनले नयाँ नियम नमान्नेलाई जरिवाना तिराउने सहितका कडा कारवाही गरिने चेतावनी दिएका छन् ।
सबै पुस्तकालय, जिम, खेल मैदान, चर्च तथा धार्मिक भेला, विवाह समारोहमा रोक लगाइएको छ । अन्त्येष्टि समारोह भने गर्न पाइनेछ । सडक र रेल नेटवर्क खुल्ला रहेपनि त्यो अत्यावश्यक सेवाका कामदारले मात्र प्रयोग गर्न पाउने छन् । बेलायतमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण ३ सय ३५ जनाको मृत्यु भैसकेको छ भने ६६ सय ५० जना संक्रमित भएका छन् ।